အလင်းအပင်အချို့ဘက်တီးရီးယားနှင့်အချို့သော protistans ဆယ်လူလာအသက်ရှူ ATP, ရှိသမျှသက်ရှိအသုံးပြုတဲ့လောင်စာသို့ပြောင်းပေးထားတဲ့သကြား, ထုတ်လုပ်ရန်နေရောင်ခြည်ကနေစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုဖို့အရာအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်သောဓာတုစွမ်းအင်သို့အသုံးမပြုနိုင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း, အစိမ်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်းလိုရိုဖီးလ်၏လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အချိန်အများစုမှာအဆိုပါ photosynthetic ဖြစ်စဉ်ကိုကျနော်တို့လုံးဝအသက်ရှင်လျှက်နေဖို့ရှိရမည်သောအောက်စီဂျင်ရေနှင့်လွှတ်ပေးအသုံးပြုသည်။
အလင်း၏သံသရာကိုရှင်းပြပါ။ အဲဒါကိုမှ CHART ။ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်။
တူညီတဲ့အပင်လေးပေါက်ပါဘူး။ အပင်နှစ်ခုအပေါ်နေရောင်ခြည်၏ပမာဏကန့်သတ်။ နေ့စဉ်မိမိတို့၏အမြင့်နှင့်တန်ဆာကိုတိုင်းတာပါ။ ကန့်သတ်နေရောင်ခြည်နှင့်အတူအပင်ကွဲပြားခြားနားသောရှိပါသလား ဘယ်လိုလဲ?
quick Links များ: သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းများအကြံပြုချက်များညွှန်းကိန်း | High School တွင် Homework မှအကူအညီ | High School တွင် Survival လမ်းညွှန်
About.com မှာဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ site ၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုအပေါ်ကဒီမှာတည်ရှိသောအဆိုပါသိပ္ပံစီမံကိန်းများကိုင်း၏လမ်းညွှန်, Denise ဃ Witmer ကတီထွင်စိတ်ကူးများဖြစ်ကြသည်။ အချို့ကအထက်တန်းကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်သူနှစ်တာကာလအတွင်းပြီးစီးစီမံကိန်းများ, သုတေသနပြုစီမံကိန်းများနှင့်အခြားသူများမူရင်းစိတ်ကူးများဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးတစ်ခုသိပ္ပံစီမံကိန်းကိုပြီးစီးအောင်ကူညီမယ့်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဤအသိပ္ပံတရားမျှတတဲ့အတွေးအခေါ်များကိုအသုံးပြုဖို့ပါ။ တစ်ဦးသင်တန်းနည်းပြအဖြစ်သင့်အခန်းကဏ္ဍများတွင်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူဤစီမံကိန်းကိုဝေမျှဖို့အခမဲ့ခံစားရသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့အဘို့စီမံကိန်းကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိလျှင် link ကို post, သင့်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ဤစီမံကိန်းကိုစိတ်ကူးများကော်ပီမကူးကြဘူးပါ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပစ္စည်းများနှင့်အတူ 365 ရိုးရှင်းသောသိပ္ပံစမ်းသပ်မှု
"သိပ္ပံပညာ၏အခြေခံပျော်စရာနှင့်ပညာရေးတို့သည်လက်-on ကိုအိမ်မှာအလွယ်တကူနှင့်စျေးသက်သာစွာဖျော်ဖြေနိုင်စမ်းသပ်ချက်၏တစ်ဦး၏တစ်နှစ်တန်ဖိုးရှိဘဝမှယူဆောင်နေကြတယ်။ " ဤစာအုပ်ကိုဝယ်ယူကြသူလူများကနားလည်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလိုအပ်ပါတယ်သူကကျောင်းသားအဘို့ကြီးသောခေါ်ပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကသိပ္ပံကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါစာအုပ်ငယ်ရွယ်နှင့်အထက်နှစ်ဦးစလုံးကျောင်းသားများကိုအဘို့ဖြစ်၏။
"(ရေညှိ, PuTTY နှင့် goop!) သင့်ကိုယ်ပိုင် Non-နယူတန်အရည်ကို မှစ. ဘယ်လိုတစ်ဦးဝင်္ကတဆင့် run ဖို့မျိုးစေ့ကိုကြဲ bug ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့, သင်သိပ္ပံအမေရိကန်ဂရိတ်သိပ္ပံတရားမျှတသောနှင့်အတူလုပျနိုငျမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမှုအရာများ၏အရေအတွက်မှာအလှနျအံ့သွဖြစ်လိမ့်မယ် စီမံကိန်းများ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုနှင့်သိပ္ပံအမေရိကန်အတွက်ကောင်းစွာ-လေးစား "အပျော်တမ်းသိပ္ပံပညာရှင်" ကော်လံအပေါ်အခြေခံပြီး, တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်တွေ့ရှိခဲ့သာမန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်၏။ "
"တစ်ဦးသိပ္ပံမျှတသောတရားသူကြီးများနှင့်နိုင်ငံတကာသိပ္ပံတရားမျှတတဲ့ဆုရှင်အားဖြင့် Written, ဒီ-ရှိရမည်အရင်းအမြစ်တစ်ဦးအနိုင်ရသိပ္ပံတရားမျှတတဲ့စီမံကိန်းကိုအတူတကွချပြီးအဘို့အမဟာဗျူဟာများနှင့်ထောက်ပြနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။
ဒီနေရာတွင်သိပ္ပံတရားမျှတသောလုပ်ငန်းစဉ်၏အခြေခံကနေသင့်ရဲ့တင်ဆက်မှု polishing ၏နောက်ဆုံးမိနစ်အသေးစိတ်ကိုရန်, အကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအပေါ် nitty-gritty ရလိမ့်မယ်။ "
လုံးတာဝန်မဲ့သိပ္ပံ၏စာအုပ်: လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်များအဘို့ 64 ရဲစမ်းသပ်မှု
"ဖမ်းယူကြောင်း 64 တန်ဖိုးရှိသောသိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်, crackle, ပေါ့ပ်, ooze, လေယာဉ်ပျက်ကျ, စန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်နံ! Marshmallows မှစ. နေအိမ်လုပ် Lightning, ဧရာ Air ကို Cannon စုစုပေါင်းတာဝန်မဲ့သိပ္ပံလေးတွေ '' ငါ့ကိုနှိုး၏စာအုပ်ဖို့ Sandwich ကအိတ်ဗုံးမှ steroids အပေါ် osmosis, လေဖိအားများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏နယူတန်ရဲ့တတိယဥပဒေများကဲ့သို့သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမူသရုပ်ပြနေစဉ်သိချင်စိတ်။ "
တစ်တုံ Polymer အမျိုးအစား Ball ကို Make ရန်ကဘယ်လို
တစ်ခုက Apple အတွက်ဘယ်လိုအများကြီးရေလား?
Beginners များအတွက်အကောင်းဆုံး crystal ဟာ
အတုသွေးနှင့် Guts ဟယ်လိုကြော်
Glass ကို Tube Bende နှင့်ဆွဲပါဖို့ကိုဘယ်လို
ဗိုင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်မီးသတ် Make ရန်ကဘယ်လို
နိုက်ထရပ်အောက်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ရယ်မောဓါတ်ငွေ့ Make လုပ်နည်း
တူရကီရင်သားများနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ငွေကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
နည်းပညာ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏အီလီနွိုက်အင်စတီကျု
စပိန်ပြည်တွင်းစစ်: Guernica ဗုံး
လျှပ်စစ် Resistivity အဓိပ္ပာယ်
Antoni Gaudi, အနုပညာနှင့်ဗိသုကာပညာ Portfolio
နှစျခု-Face: Gemini ၏အမှောင်ဘေးထွက်
1915-1934 မှစ. ဟေတီ၏အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်
တောင်းဆိုသူများ - မဲပေးပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး
America မှာရရှိနိုင်တဲ့ 10 စျေးအချိုဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဒါ့အပြင် Top Hits ဖြစ်လာဆိုလိုသည်မှာယခင်နံပါတ် 1 ပေါ့ပ်သီချင်းများ၏ '' 80s ဇာတ်ကား
ကျွမ်းဘားများအတွက် Center က Split ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့တစ်ဦးကအဆင့်-by-step လမ်းညွှန်
ဖန်မျှင်ထည် Delamination နားလည်သဘောပေါက်
Giuseppe Verdi အားဖြင့်သရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း၏တစ်ဦးကအိမ်ခန်းနှင့်
Ron Clark ကအားဖြင့် Excellent က 11
အဘယ်အရာကို ACT မီညသလားဖို့
Clive Owen: Libra မင်းသား
PGA Tour ပေါ်နှင့်ဗိုလ်မှူးအတွက်ဖြတ် Make မှအသက်အငယ်ဆုံးဂေါက်သီး
တိုးချဲ့တုံ့ပြန်မှု Item ကျောင်းသားသင်ယူ Enhance နိုင်သလား
'' တစ်ဦးက Doll ရဲ့အိမ် '' ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း